Cadde Duqa Magaalada Muqdisho: Tallaabo ku dayasho mudan
Mararka qaar waxaa jira tallaabooyin adag oo u bahan calool adadeyg iyo ka fiirsi badan, hasa yeeshee go'aansashadeeda ay noqon karto tallaabo uu qof waliba garto inay tahay mid ku dayasho mudan. Markii uu Xamar yimid duqa Magaalada Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolaka Banadir kulan uu la yeeshay guddiga olyimbiga Somaaliyeed waxaa uu ku sheegay in uuusan wadan qori ee uu wato gaari gacan, taas oo ah astaan nabad salka ku haysa oo muuujineysa dhismo cusub ama dib u dhis taasoo aan beryahan lagu arag hogaamiyaasha magaalada Muqdisho.
Maxamuud Xasa Cali 'Cadde' waxaa uu isla markiiba bilaabay inuu la kulmo urrurrada bulshada ee nabadda wax ku raadiya sida Fannaaniinta iyo kooxaha ciyaaraha si uu dadka ugu muujiyo inay jirto waddo kale oo aan qoriga ahayn oo wax lagu xallin karo.
Duqa magaalada Muqdisho oo ah nin u dhashay Muqdisho waxaa uu xil ka saran yahay dhammaan dadka ay hoyga u tahay magaalada.
Magaalo waxaa ka naxa oo ay si aad ah u taabaneysaa dhibaatadeeda hogaamiyaheeda marka uu yahay shaqsi ku leh xididdo iyo ehel. Caddana waxaa uu si cad u buuxinayaa dareenka asalka ah ee reer dadka Muqdisho oo waxaa uu u dhashay, ku dhashay, kuna barbaaray wadnaha Muqdisho. Horumarka ay sameysaa waxaa uu ugu muuqanayaa si gaar ah isaga oo waa nin gurigiisii dhisaya. Ma aha oo kaliya in ay u taabanayso muqdisho oo kaliya inuu guto xilka loo dhiibay ee waxaa uu dareen u leeyahay jiritaankeeda, fidideeda iyo wanaageeda dambe.
Waxaa magaalada soo maray dhowr duq magaalo intii ay askarta xukunka dalka boobtay, midkoodna ka ma iman dadka Muqdisho ee waxaa ay ku yimaadeen magacaabid wareegto madaxweyne, waxayna jabka la qabtay magalooyin Hargeysa, Baydhabo iyo kuwa kaloo badan oo dalka ah xilalkooduna loo dhiibay mid u naxayn, ka naxeyn, kana warqabin xanuunkeeda gaarka ah. Waxaa la yiri ' nabar suulka ku yaalla qofbaa laga qariyaa, mid saracda ku yaallana qofbaa la tusaa'. Haddaba Cadde waxaa uu dareen gaar ah u leeyhay baahida Muqdisho oo ah halka uu ka soo jeedo fac ka fac.
Cadde mid kamid sababaha uu nabadda u cuskanayo, marka laga soo tago isagoo nin nanbadeed ah, haddana waxaa uu ogyahay in hal guri oo xalaala oo ka dumaa muqdisho uu uga damqanayo sidii guriisa oo kale. Sidaas darteed waxaa ka go'an in uu mar waliba xoojiyo nabad ku wada noolaashaha dadka ay hoyga u tahay magaalada.
Dhinaca kale Muqdisho waxaa caasimadda dalka ka dhigay mudnaanteeda iyo waxa ay ugu deeqdo dadkeeda iyo kuwa u soo martiyaba. Waa magaalo bilicsan oo bari iyo galebeed, waqooyi iyo koofur loga soo hayaamo. Waa magaalo ubad korisa ah oo ruuxa waaga ugu baryo uu ka heli karo wax uu ku quudiyo ehelkiisa.
Duqa magaalada Muqdisho Mudane Maxamuud Xasan Cali waxaa uu qaaday tallaaabooyin ku dayasho mudan. Waxaana uu hawsha ka bilaabay inuu kulammo la yeesho dadka degan magaalada ee ay hooyga u tahay kuwooda aan hubeysneyn ee ku dhismay rabitaanka shacbiga sida Fannaaniinta, ciyaartooyda iyo duubaba dhaqameedyada beelaha Somaaliyeed ee ku sugan Muqdisho.
Sidoo kale waxaa uu ka qeyb galay Caleema saarkii ugaaska beesha Ceyr oo ah beelaha sida aadka ah uga muuqda nolsoha magaalada Muqdisho. Arrintaas oo ah arrin macno iyo mugba leh kana mid ah waxyaabaha isu soo dhaweeya bulshada iyo beelaha Somaaliyeed ee colaadda lakala dhexdhigay. Waxayna arrintaan ku arooreysaa waddadii dib u heshiisiineed ee beelaha Somaliyeed.
Cadde waxaa uu muujiyey inuu leeyahay karti uu uga gudbi karo xeyndaabka ku xeeran siyaasiyiinta Somalida taasoo ah dano shakhsiyadeed oo lagu fuliyo magacyo beeleed laguna koro jaran jarada dhiiga leh ee shacbiga Somaliyeed. Waxaana uu jebiyey derbi dhegax u muuqday laakiin ka jilcan.
Tallaaboyinka uu qaaday intii uu ka soo dagay Garoonka cisilley waa kuwa ku dayasho mudan oo keeni kara is faham iyo in Caasimadda loogu wada noolaado si nabad, kalgacal iyo horumar laga wada dheefsado.
Haddaba hogaamiyayasha Somaliyeed waxaa la gudboon in ay gartaan in wadahadalka daacadda ahi uu dhaliyo in wax la wada qabsado, la is afgarto,laguna dayan karo tallaabada uu qaday duqa Muqdisho. Laakiin waxaa hawsha ugu badani ay u tallaa dadka Muqdisho si aysan u lumin fursaddan ee la shaqeeyaan Cadde iyagoo qalbiga ku haya in uu yahay nin aan dumin karin gurigiisa inuu daryeelo maahee.
WQ. Maxmed Axmed